JINGHPAW KASA: ဗမာအစိုးရစစ်တပ်များ ပြည်သူများ၏ ငွေကြေး ဥစ္စာပစ္စည်းများ လုယက်ခိုးယူ
အောက်တိုဘာ (၁၅) တနင်္လာ
ကချင်ပြည်နယ် ကေအိုင်အိုအစိုးရ အနောက်ပိုင်းတိုင်း တပ်မဟာ (၂) နယ်မြေဖြစ်သော ဖားကန့်ဒေသ ကထန်ယန် ကျေးရွာတွင် ရောက်ရှိနေသော ဗမာအစိုးရစစ်တပ် တပ်မ (၈၈) မှဗမာစစ်သားများသည် ဒေသခံပြည်သူများ၏ ငွေကြေး ဥစ္စာပစ္စည်းများကို လုယက် ခိုးယူလျက် ရှိကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။ အောက်တိုဘာ (၁၃) ရက်နေ့တွင် ဗမာအစိုးရစစ်သားများသည် ကထန်ယန် ကျေးရွာမှ ဦးဒရှီနော်ဘောက် ၏နေအိမ်မှ ကျပ်ငွေ (၁) သိန်းကို လုယူသွားခဲ့ကြောင်း ကြားသိရပါသည်။ ဤဗမာအစိုးရ စစ်သားများသည် ဖားကန့်ဒေသသို့ စစ်အင်အားဖြည့်ရန် ရောက်ရှိလာခြင်းဖြစ်ပြီး အင်အား (၅၀) ကျော်ရှိကြောင်းကိုလည်း သိရှိရပါသည်။ ဤဗမာအစိုးရစစ်တပ်အဖွဲ့တွင် အပြင်းအထန် နာမကျန်းဖြစ်နေသော တပ်ကြပ်ကြီးတစ်ဦး လည်းပါရှိကြောင်း ဒေသခံများမှ သိရှိရပါသည်။
The (88) battalion Government troops robbed valuable things from the Ka Htang Yang villagers, near Hpa Kant region, which is under KIA (2nd) brigade area, said the villagers. The Burmese troops were round about 50 and robbed 100, 000 kyat from villager Dashi Naw Bawk house on 13th October. These troops were reinforcing to the Hpakant area and one of the sergeants was seriously ill.
dai myen hpyen la ni lagut dap ni rai ma ai.
karaiedai zawn re ai myen sawa ni hpe mu ya rit law